About Us - Sunday Myanmar
Don't let go of the opportunity which will bring the best to you!
Sunday online media သည် Sunday journal ကထပ်မံမွေးဖွားပေး လိုက်တဲ့ သတင်းမီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Sunday အနုပညာ သုတရသ ဂျာနယ်တည်ထောင်ခြင်းမှာ 2012 ခုနှစ် ကတည်းက ဖြစ်ပြီး ..
Sunday online media သည် ခေတ် စနစ် အရ အင်တာနက် ဖေ့ဘွတ်ခ် website စသဖြင့် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး လမ်းကြောင်း ကူးပြောင်း ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အနုပညာ သတင်းများ ၊ဆောင်းပါးများ၊ ကဏ္ဏများ နှင့် နောက်ဆုံးရ အနုပညာသတင်းများကို ပြန်ကြားပေးရန် ပညာပေးရန် ဖျော်ဖြေပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပိုမို လျှင်မြန်တိကျသော သတင်း အချက်အလက်များကို ပရိသတ်ဆီ သို့ အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင် နိုင်မည့် အင်တာနက် မီဒီယာ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး မကြာခင် အချိန် ကမှ စတင် အကောင်ထည် ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Sunday Journal သည် မြန်မာ နိုင်ငံရှိ နာမည်အကျော်ကြားဆုံး အနုပညာ ဂျာနယ် ငါးခု တွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ပရိသတ် အားပေးမှုမှာ အဓိကအားဖြင့် အသက် ( ) မှ ( ) ကြား အားပေးလျှက်ရှိပြီး စတင်အကောင် အထည်ဖော်သည့် အချိန်မှ ယနေ့အထိ တစ်ပတ်လျှင်ပရိသတ် ( ) ကျော် ရရှိနေသည့် အရှိန်အဟုန်ကောင်းသော မီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
Video file များမှာလည်း အနုပညာရှင်များ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများ နဲ့ စိတ်ပါဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တင်ဆက်နိုင်သဖြင့် Like များ Shareများ နှင့် ..တုန့်ပြန်မှု ( ) အများဆုံး ရလဒ်များကို ယခု ကဲ့သို့ သိရှိ နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
အနုပညာ ကို အရူး အမူးစွဲလမ်းပြီး အနုပညာကို များစွာ စိတ်ပါဝင်စားသည့် အသက်အရွယ် ဖြစ်အောင် ၁၈ နှင့်၃၈ ကြား ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီး များသည် Sunday ၏ ပင်တိုင်ပရိသတ်ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ် အားဖြင့် အချိုးကျ ရှိကာ လူငယ် လူရွယ် တို့မှာ ပိုမို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှိသည့် မီဒီ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်း စစ်တမ်းများအရ သိရှိရသည်။
မည်သည့်နေရာများမှ ပရိသတ်များ ကြည့်ရှု ကြမည် ကိုလည်း တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် နည်းပညာ နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိပြီး ပိုမို အသိအမြင်ဖွံ့ဖြိုးသော ရန်ကုန်မြို့ အနီးတဝိုက်တွင် ကြည့်ရှု နှုန်း အများဆုံး ဖြစ်ကာ .. ( ) ရှိပြီး ကျန်သည့် အစိတ် အပိုင်းများမှာ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်မှ ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယို ဖိုင်များ updated သတင်းများ ဓါတ်ပုံများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ကြသည့် ပရိသတ် စုစုပေါင်းမှာ တစ်ပတ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၂.၅ million ခန့် ရှိကြောင်း လေ့လာသိရှိရသည်။
Advertising Your Enterprise In Sunday Online Media
မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စေရန် Sunday Online Midea တွင် ကြော်ငြာ များ ထည့်သွင်း နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာ ဈေးနှုန်း များမှာ
Nyi Nyi Than https://www.facebook.com/nini.than.94695
Aung Thu Phyo https://www.facebook.com/profile.php?id=100007483156201
Good , the best media . ဂျနယ်ကလည်းကောင်း အွန်လိုင်း ကျတေ့ာလည်း အမြဲ အားပေး see-first ပါ
Thiha Myint https://www.facebook.com/myint.myintthan.775
လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် စကား လက်ဆောင်
အကောင်းဆုံးများ သင့်အတွက်ယူဆောင်လာမယ့် အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်ပါစေနဲ့ ။ Sunday Online media မှာ အခုပဲ ကြေငြာ စတင်ကြေငြာလိုက်ပါ။